China Tilmicosin Oral Solution 10% ifektri abakhiqizi | U-Lihua
Isixazululo se-Tilmicosin Oral 10%
I-Tilmicosin iyi-wide-spectrum semi-synthetic bactericidal macrolide antibiotic eyenziwe nge-tylosin. Ine-spectrum elwa namagciwane esebenza kakhulu ekulweni neMycoplasma, iPasteurella neHaemophilus spp. nezinhlobo ezahlukahlukene ze-Gram-positive ezifana neCorynebacterium spp. Kukholelwa ukuthi kuthinta amaprotheni synthesis synthesis ngokuzibophezela kuma-50S ribosomal subunits. Ukumelana okuwela phakathi kwe-tilmicosin namanye ama-antibiotic e-macrolide kuye kwabonwa. Ukulandela ukuphathwa ngomlomo, i-tilmicosin ikhishwa ikakhulukazi nge-bile endle, ingxenye encane ikhishwa ngomchamo.
I-Macrotyl-250 Oral ikhonjisiwe ukulawula nokwelashwa kwezifo zokuphefumula ezihambisana ne-tilmicosin-susceptible micro-organisms efana neMycoplasma spp. I-Pasteurella multocida, i-Actinobacillus pleuropneumoniae, i-Actinomyces pyogenes ne-Mannheimia haemolytica kumathole, izinkukhu, ama-turkeys kanye nezingulube.
Ukuphathwa ngesikhathi esifanayo kwamanye ama-macrolides noma ama-lincosamides.
Ukuphathwa kwezilwane ezinokugayeka okuncane kwe-microbial noma kuzinhlobo ze-equine noma ze-caprine.
Ukuphathwa kwabazali, ikakhulukazi ezinhlotsheni ze-porcine.
Ukuphatha izinkukhu ezikhiqiza amaqanda ukuze zisetshenziswe ngabantu noma ezilwaneni ezihloselwe ukuzalanisa.
Ngesikhathi sokukhulelwa kanye nokuncelisa, sebenzisa kuphela ngemuva kokuhlolwa kobungozi / kwenzuzo ngudokotela wezilwane.
Kwesinye isikhathi, ukwehliswa kwesikhashana kwamanzi noma (okwenziwe ngobisi) kokudla ubisi kuye kwabonwa ekwelashweni nge-tilmicosin.
Amathole: Kabili nsuku zonke, 1 ml ngesisindo somzimba esingu-20 kg ngobisi (lokufakelwa) izinsuku ezintathu - 5.
Izinkukhu: ama-300 ml ngamanzi okuphuza angama-litre ayi-1000 (75 ppm) izinsuku ezintathu.
Izingulube: 800 ml ngamanzi okuphuza ayi-1000 litre (200 ppm) izinsuku ezinhlanu.
Qaphela: Amanzi okuphuza anemithi noma ubisi (lokufakelwa) kufanele lulungiswe kabusha njalo ngamahora angama-24. Ukuqinisekisa isilinganiso esifanele, ukuhlushwa komkhiqizo kufanele kushintshwe ekudleni kwangempela ketshezi.
Amathole: izinsuku ezingama-42.
Ama-Broiler: izinsuku eziyi-12.
Ama-turkeys: izinsuku ezingu-19.
Izingulube: izinsuku eziyi-14.
Langaphambilini Isixazululo somlomo sePraziquantel 2.5%
Olandelayo: Isixazululo se-Toltrazuril Oral 5%
Isixazululo somlomo sePraziquantel 2.5%